Mauritius waxay u sameysaa 14 'goobooyin goobooyin' dalxiisayaasha shisheeye ee soo laabanaya
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jabinta Wararka Mauritius » Mauritius waxay dejisaa 14 'goobooyin goobooyin' oo loogu talagalay dalxiisayaasha shisheeye ee soo noqonaya
Jebinta Wararka Caalamka • Jabinta Wararka Mauritius • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Mauritius waxay dejisaa 14 'goobooyin goobooyin' oo loogu talagalay dalxiisayaasha shisheeye ee soo noqonaya
Jasiiradda Badweynta Hindiya waxaa lagu furi doonaa wejiyada inta lagu jiro 2021 iyo wejiga koowaad, laga bilaabo 15ka Luulyo ilaa 30ka Sebtember 2021, wuxuu u oggolaan doonaa socdaalayaasha tallaalan inay ku raaxeystaan ​​dalxiis dalxiis oo jasiiradda ah.
Dalxiisyaashu waxay awoodi doonaan inay ku raaxaystaan ​​xarumaha ku dhex yaal hudheelkii ay doorteen oo ay ku jiraan barkadda dabaasha iyo xeebta.
Socdaalka Mauritius ee jira 18 sano ama ka weyn waa in si buuxda looga tallaalaa Covid-19.
Air Mauritius, Emirates iyo duulimaadyo kale oo caalami ah ayaa ku dari doona awood duulimaad dheeri ah laga bilaabo 15 Luulyo 2021.
Rakaabka caalamiga ah ayaa booqan kara Mauritius laga bilaabo Julaay 15, 2021, markii ugu horreysay ee la joogo mid ka mid ah 14 "goobooyin goobeed" oo si gaar ah loogu talagalay in loogu soo dhoweeyo jasiiradda.
Dalxiisyaashu waxay awoodi doonaan inay ku raaxaystaan ​​xarumaha ku dhex yaal hudheelkii ay doorteen oo ay ku jiraan barkadda dabaasha iyo xeebta. Haddii martidu ay joogaan 14 maalmood oo ay leeyihiin baaritaanno PCR-ga ah inta ay ku sugan yihiin goobta loo dalxiis tago, waxay markaa awoodi doonaan inay ka baxaan hudheelka oo ay si xor ah ugu safraan jasiiradda inta ka hadhay joogitaankooda, iyagoo sahaminaya meelaha soojiidashada badan ee jasiiradda. Si kastaba ha noqotee, joogitaanada gaagaaban, waxay ka bixi karaan hoyga xilli hore waxayna dib ugu laaban karaan dalkooda.
Nilen Vencadasmy, Gudoomiyaha Hay’ada Dalxiiska Dalxiiska ee Mauritius ayaa yiri: “Mauritius waxay ku faraxsan tahay inay soo dhaweyso booqdayaasha caalamiga ah laga bilaabo 15ka Julaay 2021 iyadoo leh 14 goobood oo dalxiis u gaar ah oo u oggolaanaya martida caalamiga ah inay ku raaxaystaan ​​khibrad nabadgelyo iyo ammaan leh Mauritius waxay si dhow ula shaqeysay hoteelada, shirkadaha diyaaradaha iyo howlwadeenada dalxiiska si ay u horumariyaan una diyaariyaan fikirka xumbada dalxiiska ka hor furitaankeena oo dhameystiran 1da Oktoobar 2021. ”
Socdaalka Mauritius ee jira 18 sano ama ka weyn waa in si buuxda looga tallaalaa Covid-19. Waa inay maraan tijaabada PCR inta udhaxeysa 5 iyo 7 maalmood kahor bixitaanka waxaana loo baahan yahay natiijo diidmo ah inay u safraan jasiiradda. Socdaalayaashu sidoo kale waxay mari doonaan tijaabada PCR markay yimaadaan garoonka diyaaradaha ee Mauritius iyo maalinta 7 iyo 14 ee fasaxooda dalxiis, sida ku habboon.
Air Mauritius, Emirates iyo diyaaradaha kale ee caalamiga ah waxay ku dari doonaan awood duulimaad dheeri ah laga bilaabo 15ka Julaay 2021 taas oo kordhin doonta hogaaminta ilaa dib loo furayo 1 Oktoobar 2021. Wajiga 2, laga bilaabo 1da Oktoobar 2021, dadka safarka ah ee la tallaalay ayaa loo oggolaan doonaa inay soo galaan iyada oo aan xaddidnayn marka la soo bandhigayo tijaabada PCR-ga ee diidmada ah ee lagu qaaday 72 saacadood ka hor bixitaanka.
Ku dhawaaqiddu waxay daba socotaa dardargelinta ololaha tallaalka iyo horumarka laga gaarey xasaanadda xoolaha dhammaadka Sebtember. Shaqaalaha dalxiiska ayaa mudnaanta la siiyay intii lagu jiray soo saarista tallaalka. Tani waxay awood u siisay dib-u-bilaabid deg-deg ah oo ammaan ah warshadaha dalxiiska Mauritius.
Jawaabta wadanka ee aafada ayaa lagu tiriyay mid ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka iyadoo Dowlada Mauritian ay si deg deg ah uga jawaabtay talaabooyin adag oo xakameyn iyo borotokoollo ah. Badbaadada Mauritians iyo martida waxay ahayd mudnaanta koowaad tan iyo markii uu qarxay Covid-19 guushana waa natiijo ka timid dadaal wadajir ah oo ay sameeyeen dowladda Mauritian iyo dadweynaha dalka.
Soo-booqdayaasha caalamiga ah waxay dalban karaan fasaxyadooda dalxiis iyagoo u maraya hawlwadeennada dalxiiska ama toos ula hoteelada. 35 Huteel oo dheeri ah ayaa la xaqiijiyay inay yihiin hudheello karantiil buuxa ah oo u furnaan doona kaliya muwaadiniinta reer Mauritian ee aan la tallaalin, xaasaskooda iyo carruurtooda markay ku laabtaan Mauritius. Nidaamkan ma heli karaan booqdayaasha caalamiga ah ee aan tallaalin. Martida ku jirta hudheelada karantiillada buuxda waxay ku qasbanaan doonaan inay dhammaystiraan karantiil qolka ku jira 14 maalmood.